Fanamboarana boribory, famoronana & milina fanidiana | Fitaovana masinina Meixin
Mifantoha amin'ny milina haingam-pandeha avo lenta nanomboka tamin'ny 2003.
Mamatotra milina fanamboarana kalitao matevina azo amidy eto.
3 Masinina Famokarana borosy Axis Hockey
Ny fampivoarana FMX dia mamela ny fanovana haingana ho an'ny famokarana nohofana vaovao.
4 Moti-toilet Axis Toilet Brush Tufting
Miaraka amin'ny loha tokana iray, hetsika 4 axis tsy miankina, nampiasaina ho an'ny boribory boribory kely, hafa.
Mpamatsy borosy manodinkodina Professional MX200 mpamatsy
Mpanamboatra milina fanodinana volom-borona MX200 matihanina.Ny milina fanamboarana borosy MX200 dia manana traikefa manan-karena amin'ny fiasan'ny. Manana dingam-pamokarana mahazatra sy teknolojia famokarana mahafinaritra izahay. Hamarininay fa azo antoka, azo itokisana ary avo lenta ny vokatray.Ny vokatra dia nanjary ifantohan'ny indostria ary mandray prospect application mamiratra. MX200 milina fanaovana borosy namboarinaFitsapana maro karazana ho an'ny MEIXIN no notanterahina. Ireo fitsapana ireo dia mampiditra fitiliana loza voajanahary amin'ny arc, fitsapana cabling, fitiliana electromagnetic kompatibilitas (EMC), ary fitsapana fampisehoana.
Masinina fanaovana borosy hockey tokana 3 Axis
Hisafidy na hamboarina milina fanaovana borosy isan-karazany ho anao izahay araka ny karazana vokatrao. Izahay dia nanamboatra milina borosy sy kifafa sy savony 2-5axis mandritra ny 17+ taona.
China 4 Axis Single Tufting Machine mpanamboatra-MEIXIN
Hisafidy na hamboarina milina fanaovana borosy isan-karazany ho anao izahay araka ny karazana vokatrao. Izahay dia nanamboatra milina borosy sy kifafa sy savony 2-5axis mandritra ny 17 taona.MEIXIN China 4 Axis Single Tufting Machine mpanamboatra-MEIXIN
China Big disc borosy fanaovana milina 5Axis mpanamboatra-MEIXIN
China Big disc borosy fanaovana milina 5Axis mpanamboatra-MEIXINMEIXIN dia novokarina teo ambanin'ny rafitra fitantanana maoderina.5Axis 1drilling 1 milina fanaovana «puffting». Filamenta halavany 300mm.
Matihanina milina Professional Professional Brush sy mpanamboatra brush Roll
Mpanamboatra borosy matihanina sy mpanamboatra brush roll
MX210 Toro-lalana milina fanidiana tokan-trano MX210 tsara indrindra FactoryPrice
MX210 Manam-bidy vita amin'ny milina fanidiana tokan-trano tsara indrindra MX210. MX210 Manam-boto vita amin'ny fanadiovana brinezy ，，，，、、。 MEIXIN dia noforonina tamin'ny endrika samy hafa nataon'ny mpanaingo. Ny fananana mpankafy eo amin'ny tampony na amin'ny lafiny no be mpitia indrindra satria io karazana io dia manakana ny fidaboka tsy hikapoka ireo singa mandro. MX210 Mamatonalina fanadiovana mikotrika toilet Ny kalitaon'ny azo antoka dia azo antoka amin'ny MEIXIN.
China MX211 Manamboatra milina famolavolana vita amin'ny broom
China MX211 Manamboatra mpanamboatra milina famolavolana broom -. MX211 Manome Fanadiovana Broom Manamboatra MEIXIN dia tsara amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny teknika mandroso sy ny fitaovana kalitao. Ireo mpamorona miasa ho an'ny JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITED dia malaza eran-tany. MX211 Mamatonalina fanadiovana baomba fanaingoana Ny fizotran'ny asa famokarana ny MEIXIN dia mirakitra lafiny maro. Izy ireo dia fanamafisana ny fotokevitra, famolavolana modely, santionany, fananganana modely, fanjaitra, famaranana, fanasana ary fanombanana ny asa.
MX212 fanamainty mandeha an-trano sy fanatanjahantena be mpitia indrindra MX212
MX212 fanamainty mandeha an-trano sy fanatanjahantena be mpitia indrindra MX212. MX212 Fanarenana Sivana mandeha ho an'ny milina sy ny milina vaventy azo amidy. Rehefa nahavita ny soratany na ny sary ny mpampiasa dia manolotra fidirana amin'ny solosaina Windows sy Mac ny vokatra mba hamonjy ny asany. MX212 Tranon-tsofina fanamainty mandeha milina sy milina fanenomana Mpiasa mahay sy ny fitaovana marobe miantoka ny kalitaon'ny vokatra.
HighQuality WhMX 001 Pneunatic filament Cutting Machine Wholesale
HighQuality WhMX 001 Pneunatic filament Cutting Machine Wholesale-. WhMX 001 Pneunatic Filament Cutting Machine dia miasa mangina tsy misy feo manelatselatra manelingelina sy feo mikorontana ambany rehefa ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra, izay ahafahan'ny mpampiasa mijanona ao anaty tontolo milamina. famolavolana ny nanampy an'i JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MACHINERY CO., LIMITIA nandresy ny tsena. WhMX 001 milina fanoratana pneunatic filament ,.
Meixin Corporation ankehitriny
JIANGMEN MEIXIN COMB BRUSH MAKING MACHINE FACTORY, nanomboka tamin'ny taona 2003, ny orinasantsika dia manamboatra orinasa mazoto 2-5axis sy milina fanamboarana indostrialy, milina fanamafisana ary fanenoman-tena, milina fanodinana pneumatic. Nampiasaina izy io mba hamokarana karazan-trano isan-karazany. Toy ny, borosy fandroana, baoty, borosy hockey, volon-koditra, borosy bika amin'ny endriny rehetra ny borosy. Ho an'ny borosy indostrialy toy ny: borosy Roller, disc disc ho an'ny lalana, ary ny endri-borosy hafa.